1x3 Tebụl Kọfị - Imewe Mmewe
Tebụl Kọfị 1x3 sitere n'ike mmụọ nsọ site na itinyegharị ihe mgbagwoju anya. Ọ bụ ha abụọ - otu arịa ụlọ na teaser ụbụrụ. Akụkụ akụkụ niile na-anọkọ ọnụ na-enweghị mkpa maka ndozi ọ bụla. Interkpụrụ mgbochi na-agụnye naanị mmegharị mkpọda na-enye usoro nhazi ngwa ngwa ma mee 1x3 kwesịrị ekwesị maka mgbanwe ebe. Ọkwa siri ike na-esite na dexterity mana ihe ka ukwuu na ọhụụ gbasara oghere. A na-enye ntuziaka maka na onye ọrụ chọrọ enyemaka. Aha ahụ - 1x3 bụ ngosipụta mgbakọ na mwepụ nke na-anọchi anya arụmọrụ nke ihe eji eji osisi rụọ - otu ụdị mmewere, iberibe atọ.
Aha oru ngo : 1x3, Aha ndị na-emepụta ya : Petar Zaharinov, Aha onye ahịa : PRAKTRIK.
Tebụl Kọfị Petar Zaharinov 1x3